गम्भीर रुपमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटना | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
गम्भीर रुपमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटना
२०७१ पुष २८, सोमबार ०४:३७ गते
पछिल्लो समयमा आएर नेपालमा गम्भीर रुपका सडक दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । दिनदिनै सवारी दुर्घटना बढेकाले सवारीसाधनमा चढ्ने बेला सकुशल गन्तव्यमा पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने अन्योल उब्जिसकेको छ, जनतामा । दुर्घटनाका कारण धेरै जनताले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । सडक दुर्घटना किन बढिरहेको छ त ? यसमा सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
अहिले जथाभावी सडक खुलेका छन्, जसले गर्दा सडक दुर्घटना बढेको छ । सवारी दुर्घटना हुनुमा अयोग्य चालक अथवा चालकको लापरबाही पनि हो । सवारीसाधन कस्तो प्रकारको, कति क्षमताको हो र त्यो सवारीसाधन कस्तो भौगोलिक अवस्थाको बाटोमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने नहेरिनु र तीव्र गतिमा सवारीसाधन गुडाउनुले दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ ।
सवारी दुर्घटना गम्भीर रुपमा बढ्दै गएको किन हो त ? सवारी चालकको मात्र दोष नभएर क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु, मदिरा पिएर केटीहरुलाई चालकको नजिक राखेर सवारी चलाउनु र समयमा सवारी जाँच नगर्नुले सवारी दुर्घटना बढेको छ । अव्यवस्थित रुपमा सडकमा साना केटाकेटीहरु बाटो काटेर हिँड्ने गर्नाले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । सिकारू व्यक्तिलाई गाडी जिम्मा दिई चलाउन लगाउनु पनि गाडी चालकको दोष देखिन्छ । अव्यवस्थित रुपमा बनेका सडक, साँघुरा घुम्ती र जीर्ण सडकमा मनपरी ढंगले गाडी चलाउँदा दुर्घटना हुन जान्छ । सडक र गाडीको क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्नु र झुन्डिएर वा छतमा यात्रा गर्दा र महिला तथा केटीहरुसँग गफ गरेर सवारी चालकले सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन सक्छ ।
अहिले गम्भीर रुपमा बढ्दै गएका सडक दुर्घटना दिनदिनै अझ बढिरहेका छन् । सडक दुर्घटनाबाट अकालमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सडक दुर्घटनाको कारणको छानबिन समिति गठन गरे पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । एउटा सवारी चालकलाई मात्र दोष दिएर सवारी दुर्घटना कम हुने
होइन । अन्य कारणहरु बुझ्न नसक्दा दुर्घटना भइरहेका छन् । दुर्घटना कम भएको छैन, दुर्घटना कम गर्नका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने कुनै पनि प्रयास भएको देखिँदैन ।
सडक दुर्घटना बढ्दै जानुमा सामाजिक कारण पनि रहेका छन् । सडक दुर्घटना हुनुमा सवारी चालकको भन्दा संरचनात्मक कारण बढी देखिन्छ । दुर्घटनाको तथ्य तथा घटना हेर्दा बढी दुर्घटना हुनुमा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रथाको पनि हात रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअन्तरगत स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई प्रावधानमा भएअनुसारको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन
नसक्दा दिनदिनै दुर्घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । सिन्डिकेटले सडक दुर्घटनालाई बढाइरहेको छ, किनभने सिन्डिकेटमा रहेका बस पुराना र थोत्रा छन् । उकालोमा नतान्ने र ओरालोमा नरोकिने थोत्रा गाडी सञ्चालन भइरहँदा दुर्घटना बढिरहेको हो । सवारी गाडीहरुको उचित अवस्था राख्न ब्रेक, गियरको सामान्य अवस्थामा पनि जाँच नगरिँदा दुर्घटना हुन जान्छ । थोत्रा गाडी क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर चालकले चलाउँदा दुर्घटना बढेको हो ।
अर्को कुरा, विकासको गलत अभ्यासले पनि सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ, किनभने सडक सञ्जालको विस्तारको काम गर्दा कुनै प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ मापदण्ड नै पूरा नगरी राजनीतिक दल तथा गाउँका स्थापित ठूलाठालु भन्नेको दबाबमा सडकको विस्तार भएको छ । यस्ता सडक प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त र सुरक्षित छैनन् । सडकको स्तर उन्नतिको काम हुन सकेको छैन ।
अर्को कारण सडकको गुणस्तरसँग जोडिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बनेका सडक गाडी चलाउन अयोग्य रहेका छन् । साना टाटा गाडीसमेत चलाउन अयोग्य रहेका सडकमा थोत्रा गाडी सञ्चालन गर्दा दुर्घटना हुने गरेको छ । भर्खर ट्रयाक खुलेका अर्को गाडीलाई साइड दिनसमेत ठाउँ नभएको र पर्खाल नभएको सडकमा निर्बाध रुपमा गाडी सञ्चालनका लागि रूट पर्मिट दिलाउँदा दुर्घटना बढिरहेको छ ।
आजभोलि राम्रोसँग गाडी चलाउन नजान्ने व्यक्तिले सवारी अनुमतिपत्र पाई सडकमा सवारी चलाइरहेका छन् । अनि, चालकले खलासीलाई गाडी चलाउन दिँदा पनि दुर्घटना बढेको छ । अहिलेसम्म जति पनि सवारी दुर्घटना भएका छन्, सवारी चालकलाई मात्र दोष दिइएको पाइन्छ । दुर्घटना हुनुमा सामाजिक संरचनात्मक स्वरुप पनि जिम्मेवार छ भन्ने कारणको कुनै लेखाजोखा हुन नै सकेको छैन । दुर्घटनाका सामाजिक कारणलाई अध्ययन गरी समाधान गर्न सके दुर्घटना कम हुन सक्छ ।
सवारी चलाउँदा चालकहरु उनीहरुले आफ्नो सनकका भरमा चलाउँछन् । उनीहरुको हातमा यात्रुको ज्यान अडिएको छ । हरेक दिन भइरहेका घटनामा यात्रुहरुप्रति सरकारको दायित्व छ कि छैन ? राज्यको गैरजिम्मवारीपनका कारण दैनिक दुर्घटना भएका खबरले मिडिया अझै मुक्त हुन सकेको
छैन । मिडियाको खबरअनुसार अहिलेसम्म धेरै यात्रुको ज्यान गइसकेको छ । सडक दुर्घटना हुन थालेपछिको मृत्युले माओवादी जनयुद्धलाई समेत उछिनेको जस्तो देखिन्छ । सडक खन्न नपाउँदै गाडी गुडाउन थालिन्छ । सडकको अवस्था अत्यन्तै खराब छ । गाडी हरेक वर्ष नवीकरण गरिन्छ, तर त्यसको अवस्था जाँच गरिँदैन । चालकलाई सडक नियमबारे थाहा नै छैन ।
अझ अर्को मुख्य कुरा त के हो भने बढी गाडीवाला र चालकहरुको आ–आफ्नै संगठन छन्, जसले सडक दुर्घटनाको अपराधलाई संरक्षण गरेका छन् । एउटा चालकले सडक नियम उल्लंघन गर्दा उसलाई करबाही हुँदैन, किनकि उसले संगठनको धाक देखाउँछ । सरकार कठोर हुन सकेन भन्ने छ, तर कठोर हुन खोज्यो भने संगठनहरु विरोधमा उत्रिन्छन् भन्ने मानसिकता हाबी
छ । सडकको साँघुरो अवस्था खराब दुर्घटनाका कारण मात्र नभएर सडकमा पर्याप्त संकेतहरु छैनन् । कहाँ घुमाउरो छ, संकेत हुँदैन । कहाँ गति कम गर्नुपर्ने, सन्देश छैन ।
सबै चालक हरेक सडकको जानकार हुँदैनन् । धेरैजसो दुर्घटना सडकका मोडमा भएका छन् वा साइड दिन नजान्दा भएका छन् । तीव्र गतिमा चलाउँदा र ओभर टेक गर्दा पनि दुर्घटना भएका छन् । यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर संकेत राख्ने र संकेत पालना नगर्ने चालकलाई कठोर जरिवाना गर्ने गरियो भने दुर्घटनाहरु कम
हुन सक्छन् ।